Inona ny tahan'ny ny mpisolovava - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Inona ny tahan'ny ny mpisolovava
Hianatra bebe kokoa ny fampiasana Ny mpisolovava mety ho ilaina rehefa miatrika karazany roa ny toe-javatraAmin'ny lafiny iray, raha te-hampihatra ny zony na ny hiaro ny tombontsoany eo anoloan'ny mpitsara tamin'ny taona. Ny hafa tanana, raha tianao fa izany mitondra anao ny fanampiana ao amin'ny mialoha-pitsarana dingana. Mety tokoa ny kilonga fifandraisana mba hamaha ny fifandirana tamim-pirahalahiana na mba hanampy anao amin'ny famolavolana ny fifanekena ohatra. Raha ny marina, izy ireo dia ny momba ny fifanarahana teo amin'ny ara-dalàna matihanina sy ny mpanjifa.
Izy ireo no miombon-kevitra amin'ny fomba karama (fifanarahana saram, ny fivoriambe fonosana, ny fivoriambe saram toy ny isan-jaton'ny sale vola) sy ny vola.
Ny karama ny mpahay lalàna dia fitsipika mba ho aloa amin'ny maro tsikelikely (petra-bola, vonjimaika, mizana) ary dia foana ny natao ny: Ny mpisolovava mety nametra ny mpanjifa ny saran'ny mifototra amin'ny ny vokatra azo. Ity karazana fifanarahana dia matetika ampiasaina, raha ny ara-bola ny tsatòka dia zava-dehibe ny manao ara-dalàna ny torohevitry ny tsara vokatry ny laha-tahiry (ohatra: ny fifanarahana manome fa ny mpahay lalàna dia mandray ny folo ny tamby azo omena amin'ny alalan'ny mpitsara). Ohatra, ny mpahay lalàna, izay ny vadinao no adiresy mba hahazo ny fiarovana ny zon'olombelona, ary mba hahazoana fisaraham-panambadiana eo amin'ny tsiny noho ny fanitsakitsaham-bady, ny vadiny, dia mety handidy ny mpanjifa: Eny, amin'ny ankapobeny.
Raha ny tena izy, amin'ny ankapobeny, ny ambony ny karama sy ny fidiram-bola ny olona, ny zava-dehibe kokoa ny na ny tombontsoa ara-bola dia avo (antoka, ny fianakaviana ny vola, fampiasam-bola, tsy ranon-javatra, sns). Araka izany, ny saram-ny mpahay lalàna dia mety ho avo dia avo Ohatra, ny orinasa mety ny manolotra ny mari-boninahitra saran'ny.
diman-jato euro manokana ny hetra, ny mpiasa na ny mpiasa izay mitondra fanamarihana momba ny fanitsakitsahana ny fifanekena asa ka manimba ny mpampiasa, dia izy no soso-kevitra tahan'ny. euros HT ho ny rafitra, izay nankasitraka ny fandroahana noho ny tsy fahaizana.
Eny, amin ny fitsipika, ny saram-ny mpahay lalàna dia miovaova arakaraka ny toetra ny olona izay consults izany.
Ny ankamaroan ny fotoana, ny liana amin'ny lalao dia matetika zava-dehibe kokoa noho ny ara-dalàna ny fikambanana (ny mety ho niafara tany ny orinasa, very ny toetra ara-dalàna, ny famaranana ny asa ny mpiasa, mpanao heloka bevava atahorana, mitete midina ho any amin'ny zana-mpiantoka sy mpiara-mpiantoka). Ohatra, ny fakan-kevitra ny mpisolovava mety ho voampanga amin'ny fisaka ny tahan'ny HT isaky ny ora iray (na euro anisan'izany ny hetra) raha ny izy dia tsy an'asa ny olona izay te-hanao ny fomba ny fifaninanana ny famaranana. Raha toa ka ny mpampiasa izay mandray ny toro-hevitra ny mpahay lalàna, satria ny mpiasa taloha, dia manendry ny herisetra ara-nofo, ny fifampidinihana dia ho voalaza euros HT ny ora (euros), satria ny orinasa dia mety ho vola betsaka izany tranga.
Mpanelanelana amin'ny filan-kevitry ny India(CAI)
კითხვები და გადამოწმების მართვის მოწმობა